Soomaali raashin u qeybineysa mudaharaadayaasha Mareykanka - Tilmaan Media
Mudaharaadyada ka socda Mreykanka ee ka dhashay dilka nin madow ah oo ku dhintay gacanta booliska ayaa gaaray meelo badan, hase yeeshee waxaa lagu soo warramayaa in saameynta ugu weyn ay soo gaartay magaalada Minneapolis – oo ah halkii ay arrintu ka billaabatay.
Gobolka Minnesota, oo ay ka tirsan tahay magaalada Minneapolis waa meesha ay Soomaalida ugu badan ka daggan yihiin waddanka Mareykanka.
Goobo ganacsi oo ay qaarkood leeyihiin dad Soomaali ah ayaa la boobay.
Door noocee ah ayey Soomaalida ku leeyihiin mudaharaadyada rabshadaha wata?
Jaaliyadaha kala duwan ee Mareykanka ayaa ka qeyb qaadanaya mudaharaadyada, waxaana ugu badan dadka laga tirada badan yahay bulsho ahaan.
Laakiin Soomaalida ayaa hab u gaar ah ugu lug leh dibadbaxyada looga careysan yahay dilka George Floyd.
Rag iyo dumar Soomaali ah oo isbahaystay ayaa cunto ay guryaha kusoo kariyeen u qeybinaya dadka mudaharaadeyaasha ah ee xuska Mr Floyd ku sameynaya goobtii uu ku dhintay 25-kii bishii May, xilli ay booliska ku hayeen halkaas.
Raashinka ay Soomaalida qeybinayaan ayaa ah noocyo kala duwan, waxayna inta badan ku hagaajiyaan xilliga qadada.
‘Waxaan u imid inaan ka qeyb qaato nadaafadda’
Qaarkood waxay ka shaqeynayaan nadiifinta qashinka ka dhashay burburka ay mudaharaadeyaasha sameeyeen.
Nin magaciisa kusoo koobay Luqmaan, oo ka tirsan jaaliyadda Soomaalida ee dalka Mareykanka ayaa BBC-da u sheegay inuu gurigiisa uga soo tagay si uu gacan uga geysto nadiifinta waddooyinka uu saameynta ku sheegay mudaharaadya.
“Waxaan ku koray Minneapolis, oo dugsigeyga sare aan ka dhigtay. Sababta aan maanta u imid anigoo magaalada geeskeeda daggan waa inaan ka qeyb qaato nadaafadda magaalada laga sameynayo. Dad ka yimid meelo kale oo daris nala ah ayaa magaaladii burburiyay, dhibka ugu badanna wuxuu soo gaaray dadkii laga tirada badnaa, oo ay ku jiraan Soomaalida,” ayuu yiri Luqmaan.
Sidoo kale dhalinyaro Soomaali ah oo isxilqaamay ayaa kala hagaya gawaarida, kaddib markii ay booliska u suurtagali weyssay inay howshaas qabtaan, rabshadaha socda awgood.
Ceydaruus Xasan Aadan ayaa ka mid ah dhalinyarada iskood uga shaqeynaya kala hagidda baabuurta socota waddooyinka magaalada Minneapolis.
“Sababta aad shaqadaan u galay waa inaan u daneeyo dadka, waayo magaaladan annaga ayaa daggan, haddii la burburiyo waa inaan annaga hagaajisanno, haddii horumar ay gaarto magaaladuna annaga unbey dan noogu jirtaa,” ayuu yiri.
25-kii bishii lasoo dhaafay ayaa la shaaciyay muuqaal laga arkayo Mr Floyd oo dhimanaya xilli uu jilibka qoorta uga hayay askari caddaan ah oo ka tirsan booliska magaalada Minneapolis.
Maalintii xigtay ee 26-kii May ayey billowdeen dibadbaxyo qalalaase isu baddalay oo looga soo horjeeday qaabka ay ciidamada amniga ula dhaqmaan dadka madowga ah.
Dadkii goob joogga ka ahaa dhacdadaas ayaa sheegay in George Floyd uu dukaan lagu magaacbo Cap Foods ka iibsaday sigaar.
Shaqaalihi dukaanka ka shaqeynayey ayaa booliska wacay una sheegay inuu Floyd siiyey 20 doolar oo faalso ah.
Duqa magaalada Minneapolis ayaa shaqada booliska ka eryay Derek Chauvin iyo saddex askari oo kale.
Mr Chauvin, oo ah askariga jilibkiisa qoorta ka saaray ninka geeriyooday, ayaa markii dambe lagu soo oogay dacwad dil ah.
Isha Warkan: BBC
Xisbiga xukuumadda oo gudbiyay waraaqaha is diiwaan gaalinta